Mofomamy spaonjy spaonjy - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo54 minitra300 kaloria
Atody, krema, siramamy, lafarinina ary masirasira. Amin'ireto akora dimy ireto dia hahazo mofomamy misy spaonjy misy tsiro marefo sy sponjy isika: a Mofomamy spaonjy.
Mora sy haingana ny fanaovana izany rehetra izany dia teboka mankasitraka anao. Ary raha te hanome azy crunchy touch isika dia tsy maintsy hafafiny fotsiny siramamy y amygdala ambony alohan'ny hametrahana azy ao anaty lafaoro. Tsotra, marina?
Tsy toa ny bika izay efa navoakanay tao amin'ny bilaogy, ity mofomamy fanosotra ity dia tsy misy dibera. Mamonjy kaloria vitsivitsy amintsika izany.
1 Mofomamy spaonjy
Ny fanamboarana mofomamy fanosotra toy izao dia vitsy ny fahasarotana. Tsotra ny fangaro ary tsy mila fotoana be dia be avy amintsika ny fanomanana azy.
Fotoana fiomanana: 40M
Fotoana hiketrehana: 14M
Fotoana manontolo: 54M
200 g ny karavasy fikapohana
Ho an'ny sosona marefo (tsy voatery):
Amandy manta voahitsaka
Siramamy 2 sotro fihinanana
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 160º izahay
Ampifanarahanay amin'ny lolo ny lolo. Apetrakay ny atody sy siramamy ary programa 3 minitra, hafainganana 3.
Ampio ny crème sy ny reprogram 3 minitra, hafainganana 3.
Arotsaho izao ny lafarinina sy ny masirasira. Izahay dia manao fandaharana 8 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Apetrakay ao anaty lasitra manodidina ny 23 sm ny savaivony.
Afaka mametraka amandy vitsivitsy eo amboniny isika ary mamafy siramamy eranà sotro eran'ny tany rehetra. Amin'izany fomba izany no hanomezantsika azy fifandraisana masiaka.
Mofomamy ny mofomamy spaonjy izahay. Hanana izany ao anaty lafaoro mandritra ny 20 minitra amin'ny 160º ary 20 minitra hafa amin'ny 180º.
Fanazavana fanampiny - bika
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Postres, Resipeo ho an'ny ankizy, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Tsotra » Mofomamy spaonjy
Maria Ester Pi de la Serra dia hoy izy:
Rehefa manondro valopy 1 an'ny masirasira karazana Royal ianao, firy grama ny valopy? Manontany aho hoe maninona, eto Arzantina dia misy 50 grama ary amiko dia be dia be izany.
Valio amin'i María Ester Pi de la Serra
Salama Maria Esther,
Eny, araka ny nolazain'i Carmen, 16 g izy ireo any Espana. Azonao atao ny mandanja azy amin'ny fampiasana Thermomix na, raha manana ianao, mizana somary mazava kokoa.
cocola dia hoy izy:
Amin'ny hafainganam-pandeha 4 dia mampiasa lolo koa ve ianao?
Mamaly an'i Cocola
Eny ianao dia afaka mampiasa hafainganam-pandeha 4 miaraka amin'ny throttle. Indrindra rehefa miasa miaraka amin'ny koba lafarinina izay mavesatra kokoa ianao ary mila hery kely vao mifangaro tsara.
Andramo, ho hitanao ny fahombiazany!
HELLO COCOLA ETO AMIN'NY FANJAKAN'NY ROYAL YEAST FA NY RESIPA MITANDREMA MISY GRAM 16 INDRINDRA IZAO MBA Hizarazara bebe kokoa ny anao na tsy hahatratra an'io volabe io
Anaba dia hoy izy:
Salama!! Ny andro hafa nataoko ny mofomamy ary nataoko toy ny indica ihany fa may kely ary ampahany koa tsy nisondrotra ny mofomamy, manify be, maninona no hatao? Na izany aza, tao anatiny dia tsara sy marefo be
Valio amin'i Anab
Salama Anab, taiza no may ianao? Imbetsaka ny fanendasana ireo mofomamy ao anaty lafaoro no miankina betsaka amin'ny karazana fatana sy ny bobongolo ampiasaina. Raha lava sy tery ny lasitra dia mila fotoana fandrahoana sakafo bebe kokoa isika noho ny lava sy malalaka ny bobongolo (satria ho kely kokoa ny hateviny / haavon'ny mofomamy). Zahao ireto torohevitra ireto handrahoana mofomamy ao anaty lafaoro, sao hahita ny lakilen'ny olana nanjo anao izahay:
- Aza sokafana ny lafaoro alohan'ny 15 minitra voalohany.
- Raha hitanao fa nasiana masaka be loatra ny etona ary mbola tsy lasa ny fotoana dia sarony tsara amina taratasy albal izy.
- Mba hahalalanao raha efa vonona ny mofomamy anao dia tsindrio amin'ny antsy na amin'ny tsorakazo tena tsara. Raha mivoaka mando sy miraikitra izy dia tsy vita ao anatiny. Raha mivoaka madio izy dia efa anananao.
- Andraso hampangatsiatsiaka azy alohan'ny ahodiny, raha tsy izany dia ho tapaka.
Raha sahy manandrana indray ianao dia araho ny torohevitra nomen'i Irene anao dia tokony ho tsara aminao izany. Faly aho fa tianao indrindra ilay tsiro, farafaharatsiny.
fanahy dia hoy izy:
Nahita ny fomba fahandro ho an'ity mamy ity aho, nahavita azy ary nahafinaritra, misaotra betsaka
Mamaly ny fanahy
Faly aho fa tianao izany. Raha tsy nahafantatra anay ianao dia manasa anao hisoratra anarana amin'ny pejinay. Handray fanafody vaovao isan'andro ianao.
Laura Angelica dia hoy izy:
REHEFA Miresaka momba ny krisimasy amin'ny volan-tany isika, dia miresaka momba ny crimery ve? SATRIA ETO AMIN'NY MEXICO CREAM NO MATERIAL FATTY AZA ATAO AMIN'NY SURFACE REHEFA VOAFITRA NY ASA. MISAOTRA ANAO
Valiny tamin'i Laura Angelica
Antsoinay ihany koa izay mijanona eo ambonin'ny ronono-dronono saingy tsy midika izany…… Nijery an'i Google aho ary heveriko fa eny, ilay antsoinay hoe crème dia ny crème anao.
Manantena aho fa tianao ilay «mofomamy crème»! 😉
Nivoaka tsara! Inona ny tsiro malefaka kokoa amin'ny crème ary malefaka ny volony, miaraka amin'ny siramamy misy siramamy sy amandy mihodina no tanjona. Tao anaty lafaoro nataoko dia mila 30 minitra fotsiny aho, nijery azy aho satria fantatro ary fantatro fa tsy dia mila fotoana firy izy io, kitiho amin'ny tsorakazo ny taolam-paty Moorish, izay notehiriziko hijerena ny fanaovan-mofo, ary nivoaka madio, vonona, tsy iray minitra intsony. Misaotra anao!!
Misaotra Peter, noho ny hevitrao ary milaza aminay ny zavatra niainanao.
Vao nanao an'io aho. Tena mena volo be aho ka nieritreritra fa tsy vita. Toa tsara sy fofona tsara, na dia tokony hametraka amandy bebe kokoa aza aho amin'ny manaraka. Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo sy amin'ny bilaogy, manampy ahy betsaka amin'ny thermomix, manana ny M21 nomen'ny rahavaviko ahy aho ary tiako izany.
Endrey ny mahafinaritra anao nitiavanao ilay mofomamy. Ary mahafinaritra fa mahatsiaro ho mahazo aina ianao amin'ny Thermomix anao. Mampiasa 31 izahay fa apetrakao isaky ny faran'ny resipeo ny latabatra fitoviana satria heverinay fa mety hahasoa anao izany.
Misaotra nanoratra taminay.
Maribel dia hoy izy:
Salama, tsy misy menaka io resipeo io?
Valiny tamin'i Maribel
Tsia, amin'ity tranga ity dia omen'ny crème ny tavy.
Arzantina dia hoy izy:
Ataoko ny mofomamy fanosotrao, fa eo ampovoan'ny fizotran'ny fanontaniako dia manana fanontaniana aho, hafainganam-pandehan'izy ireo 8 segondra 4 na 8 minitra hafainganam-pandeha 4?
Napetrako izy 8 segondra ary tsy nofonosiny tsara ny lafarinina rehetra, ka napetrako indray 8 minitra manantena aho fa tsy mandeha.
Rahampitso no hilazako aminao ny valiny. Misaotra nizara taminay sy ny arahaba indrindra.
Valiny amin'i Argine
8 segondra izao. Raha hitanao fa tsy tafiditra ao anatin'io fotoana io dia tsara kokoa ny mamarana ny fampifangaroana ny zava-drehetra amin'ny spatula.
Manantena aho fa tianao io 😉
Manao ny fomba fahandro aho ary mandritra ny fotoana anazavany dia nisy fanontaniana iray nipoitra, hafainganana 8 segondra 4 ve sa hafainganam-pandeha 8 minitra? satria nasiako 4 segondra aloha fa tsy haiko fa ampy ny lafarinina tavela amin'ny rindrina ka napetrako nandritra ny 8 minitra ny hafainganam-pandeha 8, manantena aho fa tsy tafahoatra.
Efa ao anaty lafaoro io… .tic tac tic tac….
Etsy ankilany, tsy afaka milaza aho fa nanao mofomamy be dia be aho ary fanontaniana iray hafa izay toa tena fototra aminao, tonga tao an-tsaiko ny nandanja ny lafarinina teo am-panasivana azy "mazava ho azy fa toa be ahy izany" ary rehefa Nandeha nanampy an'io aho nolanjaiko indray ny antsasany sisa tavela tamin'izay. mavesatra kokoa ve ny lafarinina voasivana?
Ary holazaiko anao ny vokany. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nizara ny fahalalanao taminay.
Nanandrana ny fomba fahandro aho ary marefo be, tiako ny zanako noho izany
Tsara, Tere! Misaotra betsaka amin'ny hevitrao 🙂
Zucchini mafana, Feta, ary Salady Mint